व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी हस्तक्षेप : पुस्ता बित्यो, मुद्दा कायमै - Terai Nepal
२०७७ आश्विन ११ गते, आईतवार १४:५५ मा प्रकाशित
व्यक्तिगत जग्गामा सरकारी हस्तक्षेप : पुस्ता बित्यो, मुद्दा कायमै
राजविराज : न्यायालय र आफ्नै न्यायिक समितिले तत्काल रोक्न भने पनि सप्तरीको खडक नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको भवनको काम जारी राखेको छ । वडा नम्बर ८ स्थित बिसनपुरमा निर्माण भइरहेको वडा कार्यालय भवनको विवादित जमिनबारे सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चलिरहेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले खडक नगरपालिका र वडा कार्यालयसमेतलाई भदौ २४ गते नै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद सूचना जारी गरी असोज ११ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन बोलाइएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘छलफलको मितिसम्म निर्माण कार्य नगर्न, नगराउन र यथास्थितीमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खडक नगरपालिकाकै न्यायिक समितिले समेत वडा कार्यालयलाई बुधबार नै पत्राचार गरी अदालतको आदेश पालना गर्न पत्राचार गरेको छ । खडक नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अजयकुमार चौधरीले अदालतबाट आफ्नै पक्षमा फैसला हुन सक्ने नजिरहरू भएपनि तत्काल अदालतको आदेश मानेर काम स्थगित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले यथास्थितीमा राख्न अदालतबाट भएको आदेश पालना गर्न न्यायिक समितिले बुधबार गरेको पत्राचार वडा अध्यक्ष मो. इसराइलले शुक्रबार मात्र बुझेको भन्दै फोन समेत गरेर जानकारी गराएको बताए । राजमार्गस्थित वडा नम्बर ८ को कार्यालय र खडक नगरपालिका कार्यालयको दुरी एक किलोमिटर छ ।
बोदे बर्साइन नगरपालिका–७ का ५७ वर्षीय बिनोदकुमार यादवले आफ्नो नैसर्गिक अंश हक रहेको जमिनमा भवन निर्माण हुन लागेको भन्दै भदौ २४ गते निषेधाज्ञाको रिट हालेका थिए ।
वडा अध्यक्ष मो. इसराइलले ३ कठ्ठा जमिनमध्ये करिब एक कठ्ठा जमिनमा १ करोड २२ लाखको लागतमा वडा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । उनले काम गरिरहेको कन्ट्रक्शनविरुद्ध उजुरी नहालेकोले आफूले निर्माण कार्य रोक्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए ।
आफ्नो अंशभागमा परेको कित्ता नम्बर १३२१ को १ कठ्ठा ५ धुर जमिनमा खडक नगरपालिकाको वडा ८ कार्यालय भवन बनिरहेको निवेदक बिनोदले दावी गरे । उक्त जमिन सुशिल यादवबाट साविक कल्याणपुर गाविसले ०७० असार ३ गते खरिद गरेपछि वडा कार्यालयको भोगमा आएको थियो ।
बिनोदका अनुसार काका कपलेश्वरको मृत्यपछि काकी अमेरिकादेवीले बुवा, ठूलोबुवाको अंश लाग्ने जमिन समेत बिक्री गरेपछि तीन दशकदेखि मुद्दा चल्दै आएको छ । चार दाजुभाइ मध्ये कान्छा कपलेश्वर खेतीपातीको काम हेर्ने र अन्य तीन दाजु नोकरीका सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहने गरेकाले एकासगोलको १५ विगहा जमिन उनकै नाममा थियो ।
कपलेश्वरको मृत्युपछि उनकी श्रीमती अमेरिकादेवीले मानराजा र कल्याणपुरको १५ विगहा जमिन आफ्नो नाममा ल्याई ०४६ देखि ०४८ सालसम्ममा २६–२७ जनालाई टुक्रा पारेर बेचेकी थिइन् ।
वडा कार्यालयले भवन बनाइ रहेको जमिन अमेरिकादेबीले ०४८ फागुन १२ गते कबुलम खातुनलाई बिक्री गरेकी थिइन् । कबुलनबाट फुलेश्वर साह, बिन्दीलाल साह, सुशिल यादव हुँदै कल्याणपुर गाविसले खरिद गरेको जमिनमा नै वडा कार्यालयले भवन बनाइरहेको बिनोदका भाइ बिरेन्द्रले बताए ।
सप्तरी जिल्ला अदालतले ०५३ असार ११ गते बिनोदका बुवा सकलदेवको पक्षमा फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले ०५५ माघ १७ गते उल्टाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०६२ जेठ २७ गते पुनः सकलदेवकै पक्षमा फैसला गरेको उनका कान्छा छोरा नागेन्द्रले बताए ।
बुवा सकलदेव र ठूलो वुवाहरू जयकृष्ण र बालेश्वरको मुद्दा लडदा लडदै मृत्यु भएपछि मुद्दा लडन थालेका सकलदेवका जेठा छोरा बिनोदकै उमेर ५७ पुगिसकेको छ । अदालतमा हालसम्म परेको २६ वटा मध्ये २५ वटा मुद्दा जितेको जानकारी दिँदै उनले १५ बिगहामध्ये साढे २ विगाहा जमिन फिर्ता आउन अझै बाँकी रहेको बताए । ‘अदालतले फैसला गर्दा पुस्ता बित्यो, कार्यान्वयन गर्न अर्को पुस्ता कुनुपर्ने देखियो,’ बिनोदले भने ।
सुक्राइत बिशेष थारु संस्कृति झल्किने म्युजिक भिडियो “सुक्रातिके उमङ्ग” बोलको गित सार्वजनिक (भिडियो सहित)
आलु बीऊको मूल्य तेब्बर वृद्धि हुँदा किसानहरु मारमा
चर्चामा रहेको थारु गीत “गर्लफ्रेन्ड बनिजो गै” को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
मनोज महतो र अन्नु चौधरीको नयाँ थारु गीत ‘तोर मायाक सागरमा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)